"Igolide Ilebula" (nokhokho oyimpuphu): Ukwakheka kanye nokubuyekeza
Hot cocoa Bun fresh ibhotela kanye tincetu ushizi, embondelene kwamanye ukugqagqana ngamunye, - ibhulakufesi sybarite. Uma udaka iwindi, amathe imvula amafu ubambezele eduze esibhakabhakeni, ezifana ashona ukudla futhi uyonikeza ajabule usuku lonke.
Izikhathi ziyashintsha, kanye "ilebula igolide" ayiguquki
Izintandokazi "Igolide Ilebula" - cocoa, okuyinto Kuyaziwa izizukulwane eziningi zabantu baseRussia. Pheka akusiyo lula njengoba itiye noma ikhofi, kodwa umzamo umvuzo ukumamatheka emakhaya kuhle. Indlela ukupheka cocoa, kulotshiwe kwi isembozo. Isiphuzo okumnandi kakhulu eyatholakala kuphela uma kuba powder ngamaphesenti ayikhulu kusukela cocoa. "Igolide Ilebula", okwakhiwa kwalo sivunyiwe e kwamaSoviet, namanje ayikashintshi futhi kuhlanganisa cocoa kuphela powder kanye vanilla, akukho izithasiselo yokufakelwa. Izibuyekezo ngalokhu brand njalo kuphela omuhle, ngisho ngomdlandla.
Indlela yendabuko ukupheka
angapheka kanjani isiphuzo zakho ozithandayo? Ngoba kufike umuntu mumbe bakhonze kuyinto indebe ngokwanele ubisi, esisodwa noma ezimbili amathisipuni ukhokho "Ilebula Golden" futhi amathisipuni amabili noma amathathu ushukela. Phakathi ukupheka, udinga baphuze ukunambitha. Ngaphambi cocoa amathumba, kungenzeka ukuba ushukela uma hhayi amnandi noma ubisi, uma waphenduka futhi uvalwe. Kubalulekile kakhulu ukuba bagcine ngokunembile inqubo:
a metallic Skillet esikhulu round phansi isibambo eside gaya cocoa "Igolide Ilebula" ushukela-isihlabathi;
kancane kancane, ibangele njalo, uthele inkomishi eyodwa kwezine zawo ubisi hot;
iphawundi ushukela, ukhokho futhi ubisi a unama bushelelezi;
ngendlela efanayo, faka asele ubisi hot;
Letha ubilise futhi cisha.
Ngokombono Ongoti, ukhokho ezimnandi ukuphuza mug enkulu Ceramic. Uthatha isiphuzo eside ashisayo.
Iziphuzo Gourmet futhi zizincishe injabulo
Nokhokho oyimpuphu "Igolide Ilebula" - nsuku jikelele eziningi ezahlukene ushokoledi neziphuzo. Ungakwazi uphuze it kushisa, hhayi kuphela e sezulu esinamafu, kodwa futhi chilled, ne ukwengeza cream noma ubisi naseqhweni. Kunalokho, ungasebenzisa zemvelo ubisi soy noma lamantongomane. ongakhetha eziningana zotshwala ewusizo futhi original for Ongoti okwethulwa kulesi sihloko.
Ukhokho ngaphandle ubisi
Kanjani ukuba, uma ufuna ngempela ukunambitha isiphuzo chocolate kanye ubisi usebenzisa akuvunyelwe? Nokhokho oyimpuphu "ilebula igolide", okwakhiwa kwalo akukaze burdened nga ngalindelekile izithasiselo nezingahlobene nendaba, okuvumela ukuba yenza isiphuzo, kuvunyelwe ukusetshenziswa ngesikhathi ukudla Orthodox. Ngaye, esikhundleni ubisi esetshenziswa congee.
10 amagremu elayisi Pour 300 ml amanzi bese Bilisa. Songa wokudla e colander, bese usebenzisa umhluzi ukuphuza.
I-pan metal gaya cocoa 5 g 10 g ushukela, gravies umhluzi kancane uhlanganise kahle kuze kube yilapho isimo pasty.
Uthele umhluzi esisele, sibhebhezela ingxube ukuqedela isimo homogeneity. Bilisa.
Mocha Zezıhlabane ushokoledi
"Igolide Ilebula" - amamaki aphakeme cocoa. Abahle ukugaya kwenza kube nokwenzeka ukuba izame izithako ezahlukene. Indlela ngenhla yakhelwe iqembu elikhulu - abantu mayelana eziyisishiyagalombili.
Epanini esikhulu, uhlanganise cocoa metal (1 inkomishi), ushukela (1 inkomishi), ezomile ikhofi encibilikayo powder (ikota inkomishi), vanillin (1 iphakethe) kanye ingcosana kasawoti.
Letha isimo nokunamathisela-like eyohlobo ngokuthela amanzi ashisayo in izingxenye ezincane (1 inkomishi).
Beka umlilo, ibangele njalo, uthele ubisi esishisayo (6 izinkomishi) kanye ukhilimu (2 izinkomishi).
Letha abilayo uthele imibuthano.
Thatha metal epanini, eyenzelwe okungenani ezintathu izibuko okusamanzi. Chaza ke ezintathu wezipuni ushukela, esilinganayo nokhokho oyimpuphu kanye ezintathu amathisipuni zekhofi nge ingilazi yamanzi. Bilisa.
Endaweni ehlukile, ubilise izinkomishi ezintathu ubisi hot nge-1% amafutha. Ngokucophelela, ibangele njalo, awathele epanini ukushisa phezu emlilweni ophansi, govuza njalo.
Engeza i-vanilla. Ubilise akudingekile.
Thela izibuko kanye uhlobise ne ophehliwe.
On lesi sidlo elimangalisayo kuyodingeka silungise.
Cwilisa imizuzu 15-20 in ingilazi kwesigamu abilisiwe amanzi 25 g we gelatin.
Endaweni ehlukile, epanini encane, Bilisa isiraphu kanye izinkomishi isigamu ushukela, corn isiraphu kanye ingcosana kasawoti.
Lapho ushukela uncibilike, engeza ukushisa kanye ukuletha isiraphu kuze isimo kancane nekharameli: imizuzu imizuzu 8, engasekho.
Manje kufanele uthele isiraphu caramel ku gelatin uncool, zishaya nge mixer ngesivinini aphansi. Kancane kancane ukwandisa isivinini. Isisindo kumele kube uqweqwe bushelelezi. Ukubhaxabulwa lizoqhubeka amaminithi awu 15. Ekupheleni ingxube vanillin ezihlangene.
Mboza ucwecwe pan noma Teflon iphepha ezinabantu ufafaze ushukela oluyimpuphu kanye ulayishe ke preform lwebhece. Hlelemba indlela abicah spatula, ufafaze ushukela oluyimpuphu, bese uvumela yokuzigxilisa ekamelweni lokushisa ngobusuku obubodwa.
Ngakusasa ukususa lwebhece kusukela pan ngokuqondile kusukela iphepha, uthathe yizicucu isikwele roll in ushukela oluyimpuphu.
Pheka cocoa classical: Thatha ushukela, ubisi nokhokho oyimpuphu "Igolide Ilebula". Izithako, njengoba ungabona, bendabuko. Ngaphezu kwalokho, awudingi lutho. Lungiselela cocoa ngokuhambisana imiyalelo ebhaliwe ku ebhokisini. Ungasebenzisa iresiphi, ibekwe ekuqaleni kwalesi sihloko.
Ezansi ingilazi enkulu, beka ushokoledi ochotshoziwe black lombhaki, uthele cocoa wokuphuzwa kuye. Shiya igumbi ukuhlobisa Foam ophehliwe. Top ngama-marshmallow nokulahlwa kancane ufafaze ushokoledi yashizi.
Lokhu dessert is wakhonza hot phansi ushokoledi kwancibilika.
ESoviet Union kukholakala ukuthi "ilebula igolide" - cocoa izingane noma abantu nempilo ebuthaka. Ngakho-ke, ukudla kumelwe izinkulisa, izikole, ehlobo amakamu futhi sanatoriums. Lokhu akusona isimanga, ngoba ukhokho uqukethe amavithamini B (B 1, B 2, B 3, B 6 no-B 9), amavithamini A, PP no E. Kuyinto umthombo siyagwinyeka yensimbi, potassium, magnesium, calcium, phosphorus, sulphur, sodium, chlorine, molybdenum, manganese, ithusi, zinc kanye sasekhaya.
Okwamanje amanethiwekhi commercial embodiments eziningi kabanzi cocoa isiphuzo, okuhlanganisa ushukela, ubisi powder, flavour, ukunambitheka enhancers, nezivimbelakuvunda, stabilizers nezinye izithasiselo. Lena ukubaluleka encishisiwe kakhulu cocoa, ngoba solubility kangcono nokhokho oyimpuphu ziphathwe ammonium carbonate, potassium carbonate, noma baking soda, ukuthi dissected. Lokhu kwenza kube ngcono ukunambitheka isiphuzo futhi kwenza kube kalula encibilikayo, kodwa kunalokho walahlekelwa eziningi ayelapha komkhiqizo. Lungiselela isiphuzo - kuba imizuzu embalwa, kanye "ilebula igolide" - cocoa nepreparirovannoe, okusho ubhontshisi baba lusizi, kodwa hhayi ziphathwe iyiphi amakhemikhali. Noma ubani ukwenziwa ukhokho, uyazi ukuthi ivame ukuba axazulule, futhi ayikwazi exutshwe ubisi, hhayi ngaphambili, singagcotshwanga noshukela.
Lapho okwandile, omunye angase athi, i nolaka, ukudla okusheshayo isingeniso ikilasi "ukudla okusheshayo" ukhokho "ilebula igolide" uhlala iwumkhiqizo wemvelo. Izimpendulo ezivela abathengi, ukhokho ifektri "Okthoba Red", kungaba kubhekwe ekuziphakamiseni kwethu kazwelonke. Futhi nakuba isidingo silungise ukulungela, umphumela kuwufanele. Abantu bathi nokhokho oyimpuphu "Igolide Ilebula" - wangempela, yemvelo. Wamemezela ukunambitheka ushokoledi. Abathengi uyisebenzisele ukwenza isiphuzo hhayi kuphela elimnandi, kodwa futhi zonke izinhlobo nama-dessert.
Dream Ukuhunyushwa: Dragons lokho kuyiphupho nje? Okuchaza dragon ephusheni ukubona?